Olee otú Naghachi Photos si transcend Kaadị ebe nchekwa
1 transcend kaadị ebe nchekwa foto ọnwụ ndapụta
Mberede nhichapụ nke photos - mberede nhichapụ nke foto na vidiyo faịlụ site na transcend kaadị ebe nchekwa nke na-eduga data ọnwụ
Mberede formatting nke kaadị ebe nchekwa - Ị nwere ike Ọkpụkpọ kaadị ebe nchekwa gị na mmadụ na mberede nke utịp ke ọnwụ nke data
Njehie na-enyefe faịlụ - Files nwere ike furu efu si na kaadị ebe nchekwa ka na-enyefe ha ka ha na ngwaọrụ ọzọ ma ọ bụ n'ihi na ike anya na-eme n'oge a transfer ime
Mberede Anam Udeme si na kaadị ebe nchekwa - Iburu si transcend kaadị ebe nchekwa site na kọmputa pụrụ iduga faịlụ usoro ure dapụtara na data ọnwụ
N'ezie, e nwekwara ndị ọzọ na-amaghị ihe mere nke ahụ nwere ike ime ka gị data echekwara na transcend kaadị ebe nchekwa furu efu, dị ka virus agha, igwefoto ike ọdịda, wdg N'agbanyeghị nke ụdị bụrụ na ị na-na na okosobode, dị nnọọ ruo ala na-gị transcend ebe nchekwa kaadị ọma. E nwere ihe ka a ụzọ ka ị na-esi gị photos azụ - Naghachi foto site na transcend kaadị nchekwa na mgbake software.
Jirichaa mgbake nke gị furu efu foto na transcend kaadị ebe nchekwa, ị kwesịrị ị na kwụsị iji ya ozugbo mgbe mberede ahụ. Reusing kaadị ga overwrite gara aga foto na-eme ka ha unrecoverable. Nke a dị mkpa. Mgbe ahụ a foto mgbake ngwá ọrụ iji weghachite foto site na transcend kaadị ebe nchekwa ASAP.
2 Olee naghachi foto site na transcend kaadị ebe nchekwa
Get a transcend kaadị ebe nchekwa foto mgbake omume: Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac.
Download free ikpe version nke transcend kaadị ebe nchekwa foto mgbake software n'okpuru ugbu a. Na-ahọrọ nri version maka gị usoro. Ọzọ, ka na-agbalị na Windows version ọnụ.
Ma nke foto mgbake software bụ pụrụ ịtụkwasị obi na ọkachamara. Ị nwere ike iji ha na-agbake niile furu efu photos, video na ọdịyo si transcend kaadị ebe nchekwa dị 3 nzọụkwụ. Ọzọ, ka na-agbalị na transcend kaadị ebe nchekwa foto mgbake ọrụ na Windows version.
Step1 Jikọọ gị transcend kaadị ebe nchekwa na kọmputa
Nke mbụ niile, jikọọ gị transcend kaadị ebe nchekwa na kọmputa ebe gị transcend kaadị ebe nchekwa foto mgbake software arụnyere. Mgbe ahụ malite usoro ihe omume na pịa "Malite" na-amalite mgbake ọrụ.
Step2 iṅomi furu efu foto gị transcend kaadị ebe nchekwa
Ọzọ, ị ga-ahụ gị transcend kaadị ebe nchekwa achọpụtara dị ka a mbanye akwụkwọ ozi na mmemme. Họrọ na "iṅomi" ya maka furu efu photos, video na ọdịyo faịlụ.
Step3 Preview na-agbake Foto ndị dị na transcend kaadị ebe nchekwa
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu hụrụ photos otu otu na-elele mma. Akara ndị ị chọrọ na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu click on "Naghachi".
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị mbụ transcend kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Photos si transcend Kaadị ebe nchekwa